हामीले जिते केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट सजिलै योजनाहरु पार्छौं : प्रशान्त विष्ट [अन्तर्वार्ता] « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
स्थानीय तह निर्वाचन हुन अब तीन दिन मात्रै बाँकी छ । सात सय ५३ पालिकामा जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नको लागि मतदान गर्ने छन् । जनताको निर्णयमा पानीका सरकार बन्ने छ । स्थानीय निर्वाचनमा खास गरि देशको ठूलो दल नेकपा एमाले र सत्ताधारी पाँच दलीय गठबन्धनबीच चर्को प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
देशका ११ उपमहानगर मध्यको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा त्रिपक्षीय भीडन्त हुने अनुमान छ । गत स्थनीय तहको चुनावमा राप्रपाले त्यहाँ जितेको थियो । अहिले पनि राप्रपा, एमाले र पाँचदलीय गठबन्धनबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका प्रशान्त विष्टले उम्मेदवारी दिएका छन् । नेकपा एमालेबाट पशुपति दयाल मिश्र मेयरको उम्मेदवार हुन् । त्यहाँको चुनावी माहोल र प्रतिबद्धता गरिएको एजेण्डाहरुको बारेमा अनलाइनपानाकर्मी रामनाथ कुँवरले गठबन्धनका उम्मेदवार विष्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिनुभएको छ । केके गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी गठबन्धनको सबै भएर घर दैलो गरिरहेका छौं । जनतामा पनि एक किसिमको उत्साह आएको छ । गठबन्धनको उम्मेदवारहरुलाई सबैले हामीलाई विश्वास गरेका छन् । युवा नेतृत्वले केही गर्छ भन्ने आसा सबैको छ ।
मेयरमा चुनाव लड्दै गर्दा कस्ता कस्ता प्रतिबद्धताहरु जाहेर गर्नुभएको छ ?
नेपालगञ्ज नेपाल कै पुरानो सहर हो । देश कै नामबाट नामकरण भएको यो सहर जुन किसिमले अगाडि बढ्न पथ्र्यो त्यो किसिमले अगाडि बढ्न सकेको छैन् । यो सहरको ढल व्यवस्थापन, खानेपानीको व्यवस्थापन, सडक पुर्वाधारको विकास गर्न म विषेश महत्व दिनेछु । उपमहानगरपालिका बनाउनको लागि जोडिएका साविकका गाविसहरुमा आजसम्म पनि भौतिक विकास धेरै नाजुक छ । त्यहाँको विकासमा हाम्रो विशेष जोड हुने छ ।
गाउँ गाउँमा बाटो, पानी लगायतका समस्याहरु धेरै छन् । गाउँवासीले यो उपमहानगरपालिका होइन नरकपानीका हो भनिरहेका छन् । बजार क्षेत्रको मात्रै होइन समग्र उपमहानगरको विकास हुन पर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हुनेछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, महिला हिंसा जस्ता पक्षमा विभेद रहित ढंगले विकास गर्ने छौँ, भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।
औधोगिक क्षेत्र भनेर कुनै उद्योग सञ्चालनमा छैनन् । भवनहरु मात्रै छन् । हामी औद्योगिक विकासमा जोड दिएर रोजगारीको सृजना गर्ने छौं । यी सबै कामहरु युवा नेतृत्वले नै गर्छ भनेर आम मतदाताहरुले हामीलाई विश्वास गरेका छन् ।
गठबन्धन भागबण्डामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नेपाली कांग्रेसको भागमा पर्नुको कारण के हो ? कांग्रेसमा तपाईँले नै मेयरको टिकट पाउनुको कारण के हो ?
गठबन्धनबाट हामीलाई किन दिइयो भन्दा । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा हामीले मेयरमा हारेको हो । तर उपमेयरमा जितेको हो । शुशील कोइरालाको गृहनगर भएको कारणले पनि यहाँ कांग्रेसको राम्रो संगठन छ । जसको जनतामा प्रभाव राम्रो छ त्यहाँ उसैले पाउने गरि बाँडफाँड गरिएको सकियो । त्यसैगरी मैले टिकट पाउनुमा म धेरै लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिमा सकृय छु । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको दुई पटक उपसभापति भएँ । नेपाल विद्यार्थी संधको अध्यक्ष, नगर सभापति मेरो अहिले तेस्रो कार्यकाल हो । युवा र नेतृत्व गर्ने क्षमताको आधारमा मलाई पार्टीले विश्वास गरेर टिकट दिएको हो ।
नेकपा एमालेले जिती निश्चित भएको दाबी गरेको छ नि ?
हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नै छैन् । किनभने उहाँको व्यक्तित्व नै त्यस्तै छ । हामी गणतन्त्रको लागि आन्दोलनमा हुँदा उहाँ शाही सासन चलाइराख्नुभएको थियो । हामीलाई लाठी चार्ज गर्नुभएको थियो । सबै जनता हामी प्रति विश्वस्त छ । हाम्रो टक्करको उम्मेदवार यहाँ छैन । हामी धेरै बलियो छौं । गत निर्वाचनमा हाम्रो यहाँ उपमेयर र ८ वडा वडा जितेको थियो । राप्रपाले मेयर जितेकोले प्रदेश र केन्द्र सरकारमा कुनै पहुँच थिएन् । त्यसो हुनाले राम्रो योजनाहरु परेन । हामीले जितेमा हाम्रो केन्द्र र प्रदेश सरकारमा राम्रो पहँुच हुने छ, राम्रो समन्वय गर्न सक्छौँ । राम्रा र ठूला योजनाहरु ल्याउने छौं । अहिले एमालेबाट मेयर उठ्नेको कुरै गर्न पनि अफ्ठ्यारो छ । उहाँ पहिला कांग्रेसमा थिए । पछि राप्रपामा गए, मधेशवादीमा गए र अहिले एमालेमा छन् । आफ्नो स्वार्थ अनुरुप पार्टी परिवर्तन गरिराख्नुहुन्छ । पार्टी परिवर्तन गर्न उहाँको लागि कुनै नौलो विषय होइन् ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको विकासमा देखिएका मुख्य समस्याहरु केके हो ?
विषेश गरि शिक्षामा अगाडि बढ्न पर्ने त्यो भएको छैन । शिक्षा राम्रो भए अरु विकासमा पनि धेरै परिवर्तन हुन्छ । स्थानीय सरकारले शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाएर लागु गर्नुपर्छ । यहाँका स्थानीय बालबालिकाले स्थानीय मातृभाषामा पढ्न पाएका छैनन् । त्यो कुरा लागु गर्नका लागि शिक्षा ऐनहरु केही पनि बनेको छैन । हामीले जितेपछि हामी भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री संरचना तयार गर्ने छौं ।
नेपालगञ्जवासीलाई केही भन्नुछ ?
म नेपालगञ्जवासीलाई यो छोटो समयमा सबैको घर पुग्न सकेको छैन् । आदरणीय नगरवासी यहाँहरुको विस्वासलाई म डगमगाउन दिने छैन् । घोषणा पत्रमा सार्वजनिक गरिएका सबै प्रतिवद्ध पूरा गर्ने छु । मेयरमा रुखमा, उपमेयरमा छातामा र अन्य वडा अध्यक्षलगायतका उम्मेदवारहरुलाई गठबन्धनको दलहरुलाई नै मतदान गर्न आग्रह गर्छु ।
प्रकाशित मिति : बैशाख २८, २०७९ बुधबार १२ : ३४ बजे
पाँच वर्षसम्म इमान्दार भएर गरेको विकासका काम नै मेरो जितको आधार हो : मदन सुन्दर श्रेष्ठ [अन्तर्वार्ता]